Yintoni irisography? | Creatives Online
I-Risography bubuchule bokushicilela obungaziwa kude kube kutshanje, kodwa iye yakhula kwiminyaka yakutshanje ngenxa yeenzuzo zayo. Ngokuphathelele inkqubo yayo yokusebenza, sinokuthi iyafana naleyo yomatshini wokufotokopa, okanye umshicileli wesikrini. Enye yeenzuzo ezinkulu zale nkqubo kukuba awudingi kutyalo-mali ixesha elininzi okanye izixhobo. Ngokuzisa "iziphene" kushicilelo lwakho, benza ukuba iziphumo zibonakale zenziwe ngesandla.
Ukuqala nje, le yindlela elula, kodwa kufuneka uqwalasele izinto ezininzi. Isiphumo sokugqibela siyamangalisa, ngenxa yokuqina kwemibala, ukuthungwa kunye nokugqiba okugqibeleleyo. Kodwa ubatsala njani abalandeli yonke imihla?
1 Yintoni irisography?
2 Isebenza njani i-risography?
3 Iinzuzo zerisography
4 Iimfuno zokusebenzisa i-risography
5 Ukulungiswa kweefayile
Ibandakanya ntoni la irisography?
La I-Risography yinkqubo yoshicilelo lwedijithali olukhawulezayo kumphezulu othe tyaba oqhubekayo. Yenziwe nguRiso Kagaku Corporation. Ikakhulu yenzelwe ukwenza amanqaku amakhulu kunye neekopi zeefotokopi. Ikwaziwa njengeprinta-duplicator.
Kwirisography, Iinki ze-monochrome zingasetyenziswa ezifana nepinki ekhanyayo kunye ne-orenji, igolide, i-violet, i-yellow, emnyama kunye ne-turquoise. I-inki icacile, ayicacanga, ngoko ke ukuba siprinta umbala omnye ngaphezu komnye, kuya kuveliswa umbala wesithathu.
Isebenza njani i-risography?
I-"master" okanye itemplate yenziwe ngokususela kwi-original scanned ngumatshini. Imingxuma emincinci yenziwa yinkqubo ye-thermal kwaye ihambelana nendawo yeyokuqala. Istencil isongelwe kwigubu le-inki kwaye i-inki ingena kwimingxuma emincinci. Xa igubu lijikeleza ngesantya esiphezulu, iphepha lidlula ngaphakathi kumatshini ukwenza ushicilelo.
Umshicileli osetyenziselwa oku ngumatshini one-stencil roller. Ihamba ngomgca ozinzileyo ngendlela ye-swath, umgca wokuprinta, emva nangaphambili. Umbono wenziwa ngentlawulo encinci yombane engena kwizinto eziphathekayo ngoncedo lwentlawulo efanelekileyo, intlawulo embi, una ikori-riente yi una líkunye eléctrica, una ikori-riente enyea o ikori-riente ngqoa. I-Risography inokuprinta kwiindidi ezahlukeneyo amaphepha kunye nobukhulu, kodwa ezi kufuneka zingagqunywanga kwaye zingabi ngqindilili kakhulu.
Oku kunokuba nomgca omnye woshicilelo, oko kukuthi, iprinta kuphela umgca omnye ngexesha. Le ndlela isebenzisa i-inki engena-resin, yenziwe ngesiseko se-soy, esingenayo i-solvents eguqukayo. Isetyenziselwa ukuveliswa kweepowusta zentengiso, iikhathalogu, amakhadi, i-fanzines, njl.
Unokwenza imitsi emifutshane ngexabiso eliphantsi. Nangona lilikhulu inani leekopi, lisezantsi ixabiso ngekopi nganye.
Obu buchule hlonipha imeko-bume kwinkqubo yoshicilelo.
lomshicileli Isebenzisa amandla amancinci ngenxa yenkqubo yayo ebandayo.
Zifunyenwe iindawo zoqobo.
Isiphumo sine a 'eyenziwe ngesandla' ukujonga iyafana naleyo besinokuba nayo ngoshicilelo lwesikrini.
Iimfuno zokusebenzisa i-risography
Ukusebenzisa obu buchule kufuneka uthathele ingqalelo izinto ezininzi:
Kuya kufuneka yenza amaxwebhu amaninzi edijithali kumbala ngamnye. La maxwebhu kufuneka abe greyscale okanye kufuneka enziwe ngokwahlukana kombala.
Ngokuqhelekileyo, ifomathi yephepha onokuyiprinta yi-A4 okanye i-A3. Nangona kukho ezinye iifomati.
Olu hlobo lwamaxwebhu Abavumi ukuprintwa kwegazi. Ngoko indawo yoshicilelo kwi-A4 iya kuba yi-19 x 27,7cm ngelixa kwi-A3 iyakuba yi-27,7 x 40cm.
Ngokuphathelele Ubunzima bephepha buphakathi kwe-50 kunye ne-210g.
Ukuthintela ukwakhiwa kwe-inki engalinganiyo, ukumakisha, okanye ukuxinana kumshicileli, kungcono ukuba ushiye inkitha enkulu ye-inki.
Xa ulungiselela iifayile zedijithali ukuzithumela kumshicileli kufuneka zibe kwiPDF, JPEG, Illustrator okanye ifomathi ye-InDesign. Into ebalulekileyo ukuyigcina engqondweni kukuba iifonti kufuneka zilandelwe kwaye imifanekiso ifakwe. Umatshini wokuhleka utolika imibala kwi-grayscale ngoko iifayile zakho kufuneka zibe greyscale.
Njengoko sele sichazile ngaphambili, imibala kufuneka kwakhona yahlulwe kwiifayile ezahlukeneyo okanye iileya. Ukuba ifayile yakho iqulethe iindawo ezinkulu ze-inki, umnyama kufuneka ube ne-90% opacity, ekubeni ukuba uya kunika ngaphezu kweyodwa yokupasa, i-jam yephepha iyagwenywa. Ekugqibeleni, Kuyacetyiswa ukuba uthumele isiphumo sokugqibela kumshicileli, ukuze babe nesikhokelo somsebenzi wakho.
Ngoku uyazi kancinci malunga nobu buchule kunye nendlela elungiselelwe ukuprintwa. Ukulungele ukuyilinga kwaye wenze iziqwenga ezizodwa kunye nezantlandlolo oza kumangalisa ngazo abathengi bakho bexesha elizayo. Phambili!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Yintoni irisography?
Uyenza njani izitikha zeWhatsApp